ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Wouter Jurgens ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Wouter Jurgens ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၀၉း၃၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Wouter Jurgens ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးနှင့် ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA) တို့ ပူးပေါင်း၍ အသိဉာဏ်ပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲကို ယနေ့ နံနက် (၀၉း၃၀) နာရီက နေပြည်တော် Park Royal Hotel ၌ ကျင်းပသည်။
Read more about အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
မန္တလေးတက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနမှ လေ့လာရေးခရီးလာရောက်
နေပြည်တော် သြဂုတ် ၂၀
မန္တလေးတက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ(၁၃၂) ဦးပါဝင်သည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် ယနေ့ နေ့လည်(၂း၀၀) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်သို့ လာရောက်လေ့လာကြပါသည်။
Read more about မန္တလေးတက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနမှ လေ့လာရေးခရီးလာရောက်
ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနမှ လေ့လာရေးခရီးလာရောက်
ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ(၁၄၄) ဦးပါဝင်သည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် ယနေ့ နေ့လည် (၁း၀၀) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ လာရောက်လေ့လာကြပါသည်။
Read more about ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနမှ လေ့လာရေးခရီးလာရောက်
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ သြစတြေးလျဖက်ဒရယ်တရားရုံးနှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်(UNDP)တို့ ပူးပေါင်း၍ " Improved Case Data, Information Management and Reporting Workshop " ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ သြစတြေးလျဖက်ဒရယ်တရားရုံးနှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP)တို့ ပူးပေါင်း၍ Improved Case Data, Information Management and Reporting Workshop ကို ယနေ့ နံနက် (၀၉း၁၅) နာရီတွင် နေပြည်တော် ParkRoyal ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ သြစတြေးလျဖက်ဒရယ်တရားရုံးနှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်(UNDP)တို့ ပူးပေါင်း၍ " Improved Case Data, Information Management and Reporting Workshop " ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ၏ (၁၅) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ ဆက်လက်ကျင်းပ
နေပြည်တော် သြဂုတ် ၁၀
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ၏ (၁၅) ကြိမ်မြောက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့အဖြစ် ယနေ့ နံနက် (၀၉း၀၀) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဆက်လက်ကျင်းပသည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ၏ (၁၅) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ ဆက်လက်ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Deniel Patrick Chugg ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Deniel Patrick Chugg ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား ယနေ့ ညနေ ၄း၃၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Deniel Patrick Chugg ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ၏ (၁၅) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ၏ (၁၅) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက် ၉း၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ၏ (၁၅) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
နေပြည်တော် သြဂုတ် ၆
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးနှင့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ အားလုံး ပါဝင်သော စုံညီခုံရုံးသည် ယနေ့ နံနက် (၀၉း၃၀) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် ရုံးခန်းအမှတ် (၁) ၌ ရုံးထိုင်၍ ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမှု (၃) မှု နှင့် တရားမအထူးအယူခံမှု (၈) မှုကို စီရင်ချက်ချမှတ်သည်။ ထို့ပြင် တရားမအထူးအယူခံမှု (၇) မှုတို့ကို ကြားနာခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် စုံညီခုံရုံး ရုံးထိုင်ခြင်း
ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံးပန္နက်တော်တင် တွင်းတော်ဝန်းမင်္ဂလာအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်တက်ရောက်
ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံး ပန္နက်တော်တင် တွင်းတော်ဝန်းမင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် (၀၉း၀၀) အချိန်က ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက် ဟားခါး-ဖလမ်း-ကလေးလမ်းရှိ အဆိုပါ အဆောက်အဦတည်ဆောက်မည့်နေရာ မင်္ဂလာမဏ္ဍပ်၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ရာ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး တက်ရောက်သည်။
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီး ဦးမြဟန် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တရားရုံးများသို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီး ဦးမြဟန်သည် ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦှးကြွယ်ကြွယ်၊ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး ဒေါ်စန္ဒာအောင်၊ တောင်ကြီးခရိုင်တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်စိမ်းဝင်း၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားသူကြီး ဒေါ်ဌေးဌေးမော်တို့ လိုက်ပါ၍ ၂၇-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ညောင်ရွှေမြို့နယ်တရားရုံးနှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းကိုလည်းကောင်း၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချု...
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးမှ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး လမ်းညွှန်မှာကြား
နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၂၈
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီး ဦးမြဟန်သည် ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်၊ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး ဒေါ်စန္ဒာအောင်တို့နှင့်အတူ (၂၆-၁၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟိုပုံးမြို့၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တရားရုံးဆောက်လုပ်မည့် မြေနေရာသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေြး...